Practitioners of nonviolent struggle have an entire arsenal of “nonviolent weapons” at their disposal. Listed below are 198 of them, classified into three broad categories: nonviolent protest and persuasion, noncooperation (social, economic, and political), and nonviolent intervention. A description and historical examples of each can be found in volume two of The Politics of Nonviolent Action, by Gene Sharp. ​ အကြမ်းမဖက် လှုပ်ရှားနည်း ၁၉၈ ခု အကြမ်းမဖက်သော ရုန်းကန်မှုကို လေ့ကျင့်သူများသည် ၎င်းတို့၏ လက်တစ်ကမ်းတွင် အကြမ်းမဖက်သော လက်နက်များ ရှိသည်။ အကြမ်းမဖက် လှုပ်ရှားနည်း ၁၉၈ခု ကို အကြမ်းမဖက် ဆန္ဒပြခြင်းနှင့် ဖျောင်းဖျခြင်း၊ (လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေး) ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိခြင်းနှင့် အကြမ်းမဖက်ပဲ ဝင်ရောက်ပြောဆိုခြင်း ဟူ၍ အမျိုးအစား ၃ခုခွဲ၍ ဆက်လက်ဖော်ပြထားသည်။ အောက်ဖော်ပြပါ တစ်ချက်ချင်းစီ၏ အဓိပါယ်နှင့် သမိုင်းဝင် သာဓကများကို Gene Sharp ၏ အကြမ်းမဖက် လှုပ်ရှားခြင်း၏ နိုင်ငံရေး အတွဲ(၂) တွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။ အကြမ်းမဖက် ဆန္ဒပြခြင်းနှင့် ဖျောင်းဖျခြင်း နည်းလမ်းများ တရားဝင် ထုတ်ပြန်ချက်ခြင်း ၁။ ပြည်သူများရှေ့ မိန့်ခွန်းပြောကြားခြင်း ၂။ အတိုက်အခံပြုလုပ်သော စာများ သို့မဟုတ် ထောက်ခံစာများ ၃။ တက္ကသိုလ်နှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ ကြေညာချက်များ ၄။ ပြည်သူများ လက်မှတ်ရေးထိုးထားသော စာရွက်စာတမ်းများ ၅။ အမှုစွဲချက်တင်ခြင်းနှင့် ရည်ရွက်ချက်များဖော်ပြသော ကြေညာချက်များ ၆။ အုပ်စုလိုက် သို့မဟုတ် လူထုမှ အသနားခံစာများ ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော လူများနှင့် ဆက်သွယ်ခြင်း ၇။ ကြွေးကြော်သံများ၊ ရုပ်ပြောင်များနှင့် သ​​င်္ကေတများ ၈။ နဖူးစည်း စာတမ်းများ၊ ပိုစတာများနှင့် ဆက်သွယ်မှုများကို ပြသခြင်း ၉။ လက်ကမ်းစာစောင်များ၊ ပန်းဖလက်များနှင့် စာအုပ်များ ၁၀။ သတင်းစာများနှင့် ဂျာနယ်များ ၁၁။ အသံဖိုင်၊ ရေဒီယိုနှင့် ရုပ်မြင်သံကြား ၁၂။ ကောင်းကင်တွင် စာရေးခြင်းနှင့် မြေပြင်ပေါ် စာရေးခြင်း အဖွဲ့ ကိုယ်စားပြုခြင်း ၁၃။ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့များ ၁၄။ လှောင်ပြောင်ဆုများ ၁၅။ အုပ်စုလိုက် စည်းရုံးခြင်း ၁၆။ သပိတ်တားခြင်း ၁၇။ ပျက်ရယ်ပြုစရာ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပခြင်း ပြင်ပတွင် အဓိပ္ပါယ်ကောက်နုတ်နိုင်သော လုပ်ရပ်များ လုပ်ဆောင်ခြင်း ၁၈။ အလံနှင့် အဓိပ္ပါယ်ရှိသော အရောင်များ ပြသခြင်း ၁၉။ သ​​င်္ကေတများပါဝင်သော ပစ္စည်းများဝတ်ဆင်ခြင်း ၂၀။ ဆုတောင်းခြင်းနှင့် ကိုးကွယ်ခြင်းများ ၂၁။ သ​​င်္ကေတများပါဝင်သော အရာဝတ္ထုများ ဝေခြင်း ၂၂။ ဆန္ဒပြသူများ အဝတ်ချွတ်ပြခြင်း ၂၃။ ကိုယ်ပိုင် ပစ္စည်းများ ဖျက်စီးခြင်း ၂၄။ သ​​င်္ကေတများ ပါသော မီးထွန်းခြင်း ၂၅။ ပုံတူများ ပြသခြင်း ၂၆။ ဆန္ဒပြနေရင်း ပုံဆွဲခြင်း ၂၇။ သ​​င်္ကေတနှင့် နာမည် အသစ်များပြုလုပ်ခြင်း ၂၈။ ကြော်ကြားသော အသံများ ပြုလုပ်ခြင်း ၂၉။ သ​​င်္ကေတ ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း ၃၀။ ရိုင်းစိုင်းသော အမူအရာများ ပြုလုပ်ခြင်း တစ်ဦးတစ်ယောက်ခြင်းအပေါ် ဖိအားပေးခြင်း ၃၁။ အရာရှိများနောက် “နောက်ယောင်ခံ”ခြင်း ၃၂။ အရာရှိများ မခံချင်အောင် ပြောဆိုခြင်း ၃၃။ တစ်ဖက်မှ လူအများနှင့် သူငယ်ချင်းပြုလုပ်ခြင်း ၃၄။ စကားမပြောပဲ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြခြင်း ဒရာမာနှင့် ဂီတများ ပြုလုပ်ခြင်း ၃၅။ ရယ်စရာ ပြဇာတ်အတိုများနှင့် နောက်ပြောင်မှုများ ပြုလုပ်ခြင်း ၃၆။ ပြဇာတ်များနှင့် တေးဂီတများဖြင့် ဖျော်ဖြေခြင်း ၃၇။ သီချင်းဆိုခြင်း စီတန်းလှည့်လည်ခြင်း ၃၈။ လမ်းလျှောက်ချီတက်ခြင်း ၃၉။ လူအများ စိတ်ဝင်စားအောင်ပြုလုပ်ပြီး ချီတက်ခြင်း ၄၀။ ဘာသာရေး စီတန်းလှည့်လည်မှုများ ပြုလုပ်ခြင်း ၄၁။ အရေးပါသောနေရာများကို သွားခြင်း ၄၂။ မော်တော်ယာဥ်ဖြင့် လှည့်လည်ခြင်း ကွယ်လွန်သွားသူများအား ဂုဏ်ပြုခြင်း ၄၃။ နိုင်ငံရေး အတွက် ပူဆွေးခြင်း ၄၄။ အသုဘများ ပြုလုပ်ခြင်း ၄၅။ အသုဘများ ထင်ရှားမြင်သာအောင် လုပ်ဆောင်ခြင်း ၄၆။ သေသူ၏ သင်္ချိုန်းမြေပုံများကို သွား၍ အရိုအသေပြုခြင်း ပြည်သူ့အစည်းအဝေးများ ပြုလုပ်ခြင်း ၄၇။ ဆန္ဒပြရန် သို့မဟုတ် ဝိုင်းဝန်းကူညီရန် စုဝေးခြင်း ၄၈။ ဆန္ဒပြရန် အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခြင်း ၄၉။ အစည်းအဝေးနှင့် ဆန္ဒပြပွဲများက်ု အများသူမသိရန် ပြောက်ကျားစစ်ဆင်ခြင်း ၅၀။ သင်ကြားမှုများ ပြုလုပ်ခြင်း ပြန်လည်ထုတ်ယူခြင်းနှင့် ငြင်းပယ်ခြင်း ၅၁။ နေရာမှ ထွက်ခွာခြင်း ၅၂။ ဝစီပိတ်ကျင့်ခြင်း ၅၃။ ရာထူး ဂုဏ်ပကာများ စွန့်လွှတ်ခြင်း ၅၄။ မသိသလို နေခြင်း လူမှုရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိခြင်း နည်းလမ်းများ လူအများကို ဥပက္ခာပြုခြင်း ၅၅။ လူမှုရေးအတွက် သပိတ်မှောက်ခြင်း ၅၆။ ရွေးချယ်ပြီး လူမှုရေး သပိတ်မှောက်ခြင်း ၅၇။ ကာမဂုဏ်မပျက်ပြယ်အောင် ​စောင့်တည်ခြင်း ၅၈။ သူတစ်ပါးကို ဥပက္ခာပြုထားခြင်း ၅၉။ တားမြစ်မှုများ ပြုလုပ်ခြင်း လူမှုရေးပွဲများ၊ အကောက်ခွံနှင့် အဖွဲ့အစည်းမျာနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိခြင်း ၆၀။ လူမှုရေးနှင့် အားကစားဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုများအား ရပ်ဆိုင်းထားခြင်း ၆၁။ လူမှုရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအား သပိတ်မှောက်ခြင်း ၆၂။ ကျောင်းသားများ သပိတ်မှောက်ခြင်း ၆၃။ လူမှုရေး မလိုက်နာမှုများ ပြုလုပ်ခြင်း ၆၄။ လူမှုရေး အဖွဲ့အစည်းများမှ နှုတ်ထွက်ခြင်း လူမှုရေး စနစ်မှ စွန့်ခွာခြင်း ၆၅။ အိမ်တွင် နေခြင်း ၆၆။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု လုံးဝမရှိခြင်း ၆၇။ အလုပ်သမားများ အလုပ်မှ “စွန့်ခွာခြင်း” ၆၈။ ခုံလှုံလို့ရသော နေရာသို့ ပြောင်းရွှေ့ခြင်း ၆၉။ လူအများ စုပေါင်း၍ အများမမြင်စေရန် နေထိုင်ခြင်း ၇၀။ ဆန္ဒပြ၍ နေရပ်ဒေသကို စွန့်ခွာပြီး အခြားဒေသသို့ ပြောင်းရွှေ့ခြင်း စီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိခြင်း နည်းလမ်းများ: စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို သပိတ်မှောက်ခြင်း ဝယ်ယူသုံးစွဲသူများ လုပ်ဆောင်ရန် ၇၁။ ဝယ်ယူသုံးစွဲသူများ သပိတ်မှောက်ခြင်း ၇၂။ သပိတ်မှောက်ထားသော ကုန်ပစ္စည်းများအား သုံးစွဲမှု မရှိခြင်း ၇၃။ ခြိုးခြံစွာ သုံးစွဲရန် ပေါ်လစီချထားခြင်း ၇၄။ ငှားရမ်းခ မပေးခြင်း ၇၅။ ငှားရမ်းရန် ငြင်းဆန်ခြင်း ၇၆။ ပြည်တွင်း ဝယ်ယူသုံးစွဲသူများမှ သပိတ်မှောက်ခြင်း ၇၇။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဝယ်ယူသုံးစွဲသူများမှ သပိတ်မှောက်ခြင်း အလုပ်သမားများနှင့် ထုတ်လုပ်သူများ လုပ်ဆောင်ရန် ၇၈။ အလုပ်သမားများ သပိတ်မှောက်ခြင်း ၇၉။ ထုတ်လုပ်သူများ သပိတ်မှောက်ခြင်း ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရောင်းချရန် ကူညီသူများ လုပ်ဆောင်ရန် ၈၀။ ပစ္စည်းသွင်းသူများနှင့် ကိုင်တွယ်ရွှေ့ပြောင်းပေးသူများ သပိတ်မှောက်ခြင်း ပိုင်ရှင်များနှင့် စီမံခန့်ခွဲသူများ လုပ်ဆောင်ရန် ၈၁။ ကုန်သည်များ သပိတ်မှောက်ခြင်း ၈၂။ ပိုင်ဆိုင်သော ပစ္စည်းဥစ္စာများကို ရောင်းရန် ငြင်းဆိုခြင်း ၈၃။ အလုပ်သမားများ အလုပ်မဝင်နိုင်ရန် လုပ်ဆောင်ခြင်း ၈၄။ စက်မှုအကူအညီများ လုပ်ဆောင်ရန် ငြင်းပယ်ခြင်း ၈၅။ ကုန်သည်များ “အထွေထွေ သပိတ်မှောက်ခြင်း” ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ပတ်သက်သူများ လုပ်ဆောင်ရန် ၈၆။ ဘဏ်မှ အပ်ထားသော ငွေများ ထုတ်ယူခြင်း ၈၇။ အခကြေးငွေများ၊ အခွန်များ၊ အကဲဖြတ်ခများပေးရန် ငြင်းဆန်ခြင်း ၈၈။ ကြွေးမြီးများ သို့မဟုတ် အတိုးများပေးရန် ငြင်းဆန်ခြင်း ၈၉။ ဘဏ်တွင်းရှိငွေနှင့် အကြွေးများဖြတ်သိမ်းခြင်း ၉၀။ ဝင်ငွေများ ငြင်းဆန်ခြင်း ၉၁။ အစိုးရ၏ ပိုက်ဆံကို ငြင်းဆန်ခြင်း အစိုးရ လုပ်ဆောင်ရန် ၉၂။ ပြည်တွင်း ပိတ်ဆို့မှုများ ပြုလုပ်ခြင်း ၉၃။ ကုန်သည်များကို နာမည်ပျက်စာရင်းတွင် ထည့်ထားခြင်း ၉၄။ ပြည်ပမှ ရောင်းချသူများကို ပိတ်ဆို့ခြင်း ၉၅။ ပြည်ပမှ ဝယ်သူများကို ပိတ်ဆို့ခြင်း ၉၆။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကိုယ်သွယ်ရေး ပိတ်ဆို့ခြင်း စီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိခြင်း နည်းလမ်းများ: သပိတ်မှောက်ခြင်း အဓီပ္ပါယ်ပါသော သပိတ်မှောက်ခြင်း ၉၇။ ဆန္ဒပြ သပိတ်မှောက်ခြင်း ၉၈။ အမြန် လမ်းလျှောက်ခြင်း (လျှပ်စီး သပိတ်မှောက်) စိုက်ပျိုးရေး သပိတ်မှောက်ခြင်း ၉၉။ ကျေးလက်နေပြည်သူလူထုများ သပိတ်မှောက်ခြင်း ၁၀၀။ လယ်ယာလုပ်သားများ သပိတ်မှောက်ခြင်း အခြားသောအဖွဲ့အစည်းများ သပိတ်မှောက်ခြင်း ၁၀၁။ အဖိနှိပ်ခံအလုပ်သမားထုများ အလုပ်လုပ်ရန်ငြင်းဆန်ခြင်း ၁၀၂။ ထောင်တွင်း သပိတ်မှောက်ခြင်း ၁၀၃။ လက်မှုလုပ်သားများ သပိတ်မှောက်ခြင်း ၁၀၄။ အတတ်ပညာရှင်လုပ်သားများ သပိတ်မှောက်ခြင်း စက်မှုလုပ်ငန်း သပိတ်မှောက်ခြင်း ၁၀၅။ သပိတ်မှောက် အသင်းများဖွဲ့စည်းခြင်း ၁၀၆။ စက်မှုသပိတ်မှောက်ခြင်း ၁၀၇။ လူမှုကူညီရေးအဖွဲ့အစည်းများမှ သပိတ်မှောက်ခြင်း ကန့်သတ်သပိတ်မှောက်ခြင်း ၁၀၈။ စနစ်တကျကြိုတင်ကြံစည်၍ အသေးစိတ်သပိတ်မှောက်ခြင်း ၁၀၉။ သမဂ္ဂများ စက်မှုလုပ်ငန်းနှောင့်နှေးစေရန် စီမံချက်ချမှတ်ခြင်း ၁၁၀။ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း အလုပ်မတွင်ကျယ်အောင် နှောင့်နှေးစွာအလုပ်လုပ်ဆောင်ခြင်း ၁၁၁။ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ တဝေမသိမ်းလိုက်နာခြင်းဖြင့် လုပ်ငန်းများနှောင့်နှေးစေခြင်း ၁၁၂။ ကျန်းမာရွေးခွင့်ကို အသုံးချခြင်း ၁၁၃။ အလုပ်တာဝန်မှနှုတ်ထွက်ခြင်းဖြင့် သပိတ်မှောတ်ခြင်း ၁၁၄။ အကန့်အသတ် သပိတ်မှောက်ခြင်း ၁၁၅။ ရွေးချယ်သပိတ်မှောက်ခြင်း ဘက်ပေါင်းစုံ စက်မှုလုပ်ငန်းသပိတ်မှောက်ခြင်း ၁၁၆။ အထွေထွေသပိတ်မှောက်ခြင်း ၁၁၇။ ယေဘုယျသပိတ်မှောက်ခြင်း သပိတ်မှောက်ခြင်းနှင့်စီးပွါးရေး စုပေါင်းပိတ်ဆို့ခြင်း ၁၁၈။ လူထုဆန္ဒပြပွဲများ ပြုလုပ်ခြင်း ၁၁၉။ စီးပွားရေး ရပ်ဆိုင်းခြင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိခြင်း နည်းလမ်းများ အထက်အမိန့်ကိုငြင်းပယ်ခြင်း ၁၂၀။ သစ္စာစောင့်သိမှုကိုရုပ်သိမ်းခြင်း ၁၂၁။ အများပြည်သူထောက်ခံမှုများအား ငြင်းဆန်ခြင်း ၁၂၂။ ဆန့်ကျင်မှုကိုထောက်ခံအားပေးသည့် စာပေနှင့်မိန့်ခွန်းများပြောကြားခြင်း ပြည်သူများ အစိုးရနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမပြုလုပ်ခြင်း ၁၂၃။ ဥပဒေပြုအဖွဲ့များ သပိတ်မှောက်ခြင်း ၁၂၄။ ရွေးကောက်ပွဲသပိတ်မှောက်ခြင်း ၁၂၅။ အစိုးရအလုပ်အကိုင်နှင့်ရာထူးများကို သပိတ်မှောက်ခြင်း ၁၂၆။ အစိုးရဌာနများ၊ အေဂျင်စီများနှင့်အခြားအဖွဲ့များကို သပိတ်မှောက်ခြင်း ၁၂၇။ အစိုးရပညာရေးဌာနများမှနုတ်ထွက်ခြင်း ၁၂၈။ အစိုးရထောက်ပံ့သောအဖွဲ့အစည်းများကို သပိတ်မှောက်ခြင်း ၁၂၉။ ဥပဒေပြဠာန်းသူများကို ပံ့ပိုးသူများအား ငြင်းဆန်ခြင်း ၁၃၀။ ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်းဘုတ်များနှင့်အမှတ်အသားများဖယ်ရှားခြင်း ၁၃၁။ ခန့်အပ်ထားသော တာဝန်ရှိသူများကိုလက်ခံရန်ငြင်းဆန်ခြင်း ၁၃၂။ နဂိုရှိပြီးသားအဖွဲ့အစည်းများဖျက်သိမ်းဖို့ငြင်းဆန် အမိန့်နာခံခြင်းမှတပါး အခြားသောရွေးချယ်စရာများ ၁၃၃။ လိုက်လျောမှုမကြု၍ ကြန့်ကြာစေရန်ဆောင်ရွက်ခြင်း ၁၃၄။ တိုက်ရိုက်ကြီးကြပ်မှုမရှိသောက်နောက်ကွယ်မှ မလိုက်နာခြင်း ၁၃၅။ လူအများကြား ရေပန်းစားသောမနာခံမှုများ လိုက်လံလုပ်ဆောင်ခြင်း ၁၃၆။ ဖုံးကွယ်အယောင်ဆောင်၍ မလိုက်နာခြင်း ၁၃၇။လူစုခွဲရန် အတွက်စုရုံးခြင်းသို့မဟုတ် အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်းကိုတက်ရန် ငြင်းဆန်ခြင်း ၁၃၈။ လုပ်နေတာကိုရပ်တန့်ပြီး ထိုင်ချသပိတ်မှောက်ခြင်း ၁၃၉။ စစ်မှုထမ်းခြင်းနှင့် နိုင်ငံမှနှင်ထုတ်ခံရခြင်းကိုမလိုက်နာခြင်း ၁၄၀။ ပုန်းလျှိုနေခြင်း လွတ်ရာထွက်ပြေးခြင်းနှင့် မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းအထောက်အထားအတုများလုပ်ဆောင်ခြင်း ၁၄၁။ "တရားမဝင်သော" ဥပဒေများကို ပြည်သူ့မလိုက်နာခြင်း အစိုးရ၀န်ထမ်းများ လုပ်ဆောင်နိုင်သောအချက်များ ၁၄၂။ အစိုးရလက်ထောက်များထံမှအကူအညီများကို ရွေးချယ်ငြင်းပယ်ခြင်း ၁၄၃။ အထိပ်အမိန့်နှင့်သတင်းအချက်အလက်လိုင်းများကို ပိတ်ဆို့ခြင်း ၁၄၄။ ရပ်တန့်ခြင်းနှင့်အဆီးအတားများကိုပြုလုပ်ခြင်း ၁၄၅။ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးများကိစ္စများတွင် မပူးပေါင်းမပါဝင်ခြင်း ၁၄၆။ တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စများတွင် မပူးပေါင်းမပါဝင်ခြင်း ၁၄၇။ တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာမှဝန်ထမ်းများ အစိုးနှင့်ပတ်သတ်သောကိစ္စများတွင်မပူးပေါင်းမပါဝင်ခြင်း ၁၄၈။ တပ်တွင်းပုန်ကန်ခြင်း ပြည်တွင်းအစိုးရဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု ၁၄၉။ တရား၀င်ကျူးကျော်မှုနှင့်နှောင့်နှေးမှုများ လုပ်ဆောင်ခြင်း ၁၅၀။ မဲဆန္ဒနယ်အစိုးရအဖွဲ့များမှ အစိုးနှင့်ပတ်သတ်သောကိစ္စများတွင်မပူးပေါင်းမပါဝင်ခြင်း နိုင်ငံတကာအစိုးရဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု ၁၅၁။ သံတမန်ရေးရာနှင့်အခြားကိုယ်စားပြုမှုများတွင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုခြင်း ၁၅၂။ သံတမန်ရေးဖအခန်းအနားများတွင် နှောင့်နှေးစေခြင်းနှင့်ဖျက်သိမ်းခြင်း ၁၅၃။ သံတမန်ရေးအသိအမှတ်ပြုမှုများကို ရုပ်သိမ်းခြင်း ၁၅၄။ သံတမန်ရေးရာဆက်ဆံမှုများကို ရုပ်သိမ်းခြင်း ၁၅၅။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများမှနုတ်ထွက်ခြင်း ၁၅၆။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများတွင် အသင်း၀ င်ခြင်းကိုငြင်းဆန်ခြင်း ၁၅၇။ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများမှထုတ်ပယ်ခြင်း အကြမ်းမဖက်ပဲ ဝင်ရောက်ပြောဆိုခြင်းနည်းလမ်းများ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု ၁၅၈။ ကိုယ်တိုင်ပါဝင် ကိစ္စရေးရာများတွင်ပါဝင်လှုပ်ရှားခြင်း ၁၅၉။ ရှောင်ကျဉ်ရန် (က) အကျင့်သိက္ခာဖိအားပေးမှုများကို ရှောင်ကျဉ်ခြင်း (ခ) အစာရှောင်၍ ဆန္ဒပြခြင်း (ဂ) ဖိနှိပ်မှုများကို အကြမ်းမဖက်ခုခံကာရှောင်ကျဉ်ခြင်း (Ghandi’s Satyagraha method) ၁၆၀။ ပြောင်းပြန်ရုံးတင်စစ်ဆေးခြင်း ၁၆၁။ အကြမ်းမဖက်သော နှောက်ယှက်မှုများပြုလုပ်ခြင်း ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုများ ၁၆၂။ ထိုင်ခြင်း ၁၆၃။ ထခြင်း ၁၆၄။ စီးနင်းခြင်း (ကား၊ လှည်း၊ စက်ဘီး) ၁၆၅။ ဒူးထောက်ခြင်း ၁၆၆။ ညှပ်ပူးညှပ်ပိတ်၍ အကျပ်တည်းစေခြင်း ၁၆၇။ ရှစ်ခိုးဆုတောင်းခြင်း ၁၆၈။ အကြမ်းမဖက်ဝင်ရောက်စီးနင်းခြင်း ၁၆၉။ အကြမ်းမဖက်လေကြောင်းစီးနင်းခြင်း ၁၇၀။ အကြမ်းမဖက်ကျူးကျော်ခြင်း ၁၇၁။ အကြမ်းမဖက်ကြားဝင်မှုများပြုလုပ်ခြင်း ၁၇၂။ အကြမ်းမဖက်အတားအဆီးများပြုလုပ်ခြင်း ၁၇၃။ အကြမ်းမဖက်၍ နိုင်ငံ၊ မြို့များကို သိမ်းပိုက်အုပ်ချုပ်ခြင်း လူမှုဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု ၁၇၄။ လူမှုရေးပုံစံအသစ်များတည်ဆောက်ခြင်း ၁၇၅။ အဆောက်အဦးများတွင် လူများပြည့်လျှံခြင်း ၁၇၆။ တင်းကုပ်များဆောက်လုပ်ခြင်း ၁၇၇။ စကားပြောများများပြောခြင်း ၁၇၈။ တပ်သား၊ စစ်ခေါင်းဆောင်ပြောက်ကျားပြဇာတ်ရုံများ ပြုလုပ်ခြင်း ၁၇၉။ အခြားရွေးချယ်စရာလူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများရှိခြင်း ၁၈၀။ အခြားရွေးချယ်စရာဆက်သွယ်ရေးစနစ်များရှိခြင်း စီးပွားရေးဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု ၁၈၁။ ပြောင်းပြန်သပိတ်မှောက်ခြင်း ၁၈၂။ အိမ်တွင်းနေ၍သပိတ်မှောက်ခြင်း ၁၈၃။ အကြမ်းမဖက်မြေယာသိမ်းဆည်းခြင်း ၁၈၄။ ပိတ်ဆို့ခြင်းကိုဖီဆန်ခြင်း ၁၈၅။ နိုင်ငံရေးအရလှုံ့ဆော်မှုအတုများပြုလုပ်ခြင်း ၁၈၆။ အစိုးရနှင်ပတ်သတ်သောနေရာများမှဝယ်ယူမှု ပိတ်ပင်ခြင်း ၁၈၇။ ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုသိမ်းယူခြင်း ၁၈၈။ စွန့်ပစ်ခြင်း ၁၈၉။ ရွေးချယ်အားပေးခြင်း ၁၉၀။ အခြားရွေးချယ်စရာစျေးကွက်များမှ အသုံးပြုခြင်း ၁၉၁။ အခြားရွေးချယ်စရာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်များ အသုံးပြုခြင်း ၁၉၂။ အခြားရွေးချယ်စရာစီးပွါးရေးအဖွဲ့အစည်းများမှ အသုံးပြုခြင်း နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု ၁၉၃။ အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကို အလွန်အကျုးမနိုင်မနင်းဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်ခြင်း ၁၉၄။ လျှို့ဝှက်အေးဂျင့်များ၏အထောက်အထားများကို ဖော်ထုတ်ခြင်း ၁၉၅။ ထောင်ချခံရခြင်းကို တမင်လုပ်ဆောင်ခြင်း ၁၉၆။ ကြားနေဥပဒေများအားလူထုမနာခံခြင်း ၁၉၇။ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိခြင်းများလုပ်ကိုင်ခြင်း ၁၉၈။ အချုပ်အခြာအာဏာနှစ်မျိုးနှင့်အပြိုင်အစိုးရများ တည်ထောင်ခြင်း ယခုဖော်ပြထားသော နည်းလမ်းများတွင် မပါဝင်သော အခြားနည်းလမ်းများစွာကိုလည်း အသုံးပြုခဲ့ကြတာကို သံသယရှိစရာ မလိုပါဘူး။ နောင် အနာဂတ်တွင်လည်း ယခုဖော်ပြခဲ့သော နည်းလမ်း၃ခု ဖြစ်တဲ့ အကြမ်းမဖက် ဆန္ဒပြခြင်းနှင့် ဖျောင်းဖျခြင်း၊ (လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေး) ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိခြင်းနှင့် အကြမ်းမဖက်ပဲ ဝင်ရောက်ပြောဆိုခြင်း အစရှိတဲ့ နည်းလမ်းများနှင့် ကိုက်ညီသည့် နည်းလမ်းပေါင်းများစွာကို တီထွင်ကြလိမ့်မည်။ သင်တို့ သေသေချာချာ နားလည်ရမည့်အရာက အရင်နည်းလမ်းများကို ယခု အသုံးပြုမည့် နည်းလမ်းတစ်ခုခြင်းစီတွင် အကောင်အထည်ဖော်ပြီး အသုံးပြုခြင်းသည် အထိရောက်ဆုံးဖြစ်သည်။ သင် ဖိအားပေးခြင်သည့် အကြောင်းအရာကို သိရန်အလွန်ရေးကြီးပါသည်။ ထို့မှ သင် ဖိအားပေးလိုသည့်အချက်ကို ထိရောက်မည့် လုပ်ဆောင်သင့်သည့် နည်းလမ်းကို သေသေချာချာ ရွေးနိုင်မှာဖြစ်သည်။ Boston: Porter Sargent, 1973 and later editions. THE METHODS OF NONVIOLENT PROTEST AND PERSUASION
6. Group or mass petitions Communications withaWider Audience
12. Skywriting and earthwriting Group Representations
17. Mock elections Symbolic Public Acts
30. Rude gestures Pressures on Individuals
46. Homage at burial places Public Assemblies
50. Teach-ins Withdrawal and Renunciation
54. Turning one’s back THE METHODS OF SOCIAL NONCOOPERATION Ostracism of Persons
59. Interdict Noncooperation with Social Events, Customs, and Institutions
64. Withdrawal from social institutions Withdrawal from the Social System
70. Protest emigration (hijrat) THE METHODS OF ECONOMIC NONCOOPERATION: ECONOMIC BOYCOTTS Actions by Consumers
77. International consumers’ boycott Action by Workers and Producers
79. Producers’ boycott Action by Middlemen
80. Suppliers’ and handlers’ boycott Action by Owners and Management
85. Merchants’ “general strike” Action by Holders of Financial Resources
91. Refusal ofagovernment’s money Action by Governments
96. International trade embargo THE METHODS OF ECONOMIC NONCOOPERATION: THE STRIKE Symbolic Strikes
98. Quickie walkout (lightning strike) Agricultural Strikes
100. Farm Workers’ strike Strikes by Special Groups
104. Professional strike Ordinary Industrial Strikes
107. Sympathetic strike Restricted Strikes
115. Selective strike Multi-Industry Strikes 116. Generalized strike 117. General strike Combination of Strikes and Economic Closures 118. Hartal 119. Economic shutdown THE METHODS OF POLITICAL NONCOOPERATION Rejection of Authority
122. Literature and speeches advocating resistance Citizens’ Noncooperation with Government
145. General administrative noncooperation 146. Judicial noncooperation
157. Expulsion from international organizations THE METHODS OF NONVIOLENT INTERVENTION Psychological Intervention
161. Nonviolent harassment Physical Intervention
173. Nonviolent occupation Social Intervention
180. Alternative communication system Economic Intervention
192. Alternative economic institutions Political Intervention
198. Dual sovereignty and parallel government Without doubt,alarge number of additional methods have already been used but have not been classified, andamultitude of additional methods will be invented in the future that have the characteristics of the three classes of methods: nonviolent protest and persuasion, noncooperation and nonviolent intervention. It must be clearly understood that the greatest effectiveness is possible when individual methods to be used are selected to implement the previously adopted strategy. It is necessary to know what kind of pressures are to be used before one chooses the precise forms of action that will best apply those pressures.  Boston: Porter Sargent, 1973 and later editions.